China PET ihennyapade Remover BT-336 Manufacturer and Supplier | BGT
BT-336 Ezubere iji wepu ihe mmado n’elu PET na obere okpomọkụ.
Ọ bụ etinyere na ụdị nile nke ihennyapade n'elu PET mkpụrụ ihe.
Uru nke iji BT-336 dị n'okpuru:
1. Ọ naghị emebi mkpụrụ mkpụrụ ihe ọcha mgbe ọ kpochara, ọ naghị acha odo odo ma mebie.
2. Wepụ ihe mmado nke ọma na mmetọ ndị ọzọ n'otu oge.
3. Usoro dị mfe ma dị irè, mechaa maka otu oge, ụgwọ dị ala.
4. Inodorous, anaghị egbu egbu, anaghị emerụ gburugburu ebe obibi. Mmepụta dị ọcha.
Na mbụ na klas ngwaahịa, magburu onwe ọrụ, ngwa ngwa nnyefe na nke kacha mma price, anyị merie ukwuu otuto si mba ọzọ ahịa. Anyị ngwaahịa e exported na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Middle East, Europe na mpaghara ndị ọzọ.
“Omume bụ nke mbụ na uru ọ ga-erubere”, nke a bụ echiche anyị na-eduzi na azụmahịa.
Bụ teknụzụ dị elu, CHINA BGT ngwaahịa nwere njirimara nke doro anya dị elu, enweghị nsí, ọ dịghị isi ísì ma gafere "Nlekọta Nchedo Nri & Ọgwụ" na ule RoHS site na SGS. Enwere ike itinye ngwaahịa na kọntaktị nri.
CHINA BGT a ga-etinye aka iji kwalite mmekọrịta chiri anya na ogologo oge na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mba ofesi na ụlọ, na-adabere na mmepụta teknụzụ anyị. CHINA BGT ga-enye ndị ahịa anyị ọ bụghị naanị ngwaahịa dị mma, kamakwa yana ogo kwụsiri ike, ịkwụwa aka ọtọ yana ọrụ ka mma.
Nke gara aga: Ink Remover BT-301/302
Osote: Ink Remover BT-300
PITA ihennyapade Remover